Ejipta · Novambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Novambra, 2018
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Novambra, 2018
Syria: Tsy afaka miaraka ireo mpitarika Arabo, na dia ao anaty efitra aza
Amerika Latina 30 Novambra 2018
Raha niditra tamin'ny herinandro fahatelo ny herisetra tao Gaza; dia tsy nahavita niombon-kevitra tamin'ny filàna hanaovana fihaonambe maika ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Ligy Arabo izay nangatahan'i Qatar sy Syria ireo mpitondra rabo. T
Ejipta: Literatiora “Kleenex” ao amin'ny foaran'ny boky iraisampirenena ao Kairo
Fahalalahàna miteny 29 Novambra 2018
Nataon'ny bilaogera ejipsiana nihotakotaka ny Foaran'ny boky iraisampirenena 2009 tao Kairo tamin'ny famoahan-dry zareo lohatenim-boky vaovao miisa 15. Ny dinan'ny mpanoratra no mametraka ny literatioran'ny bilaogera ho literatiora "Kleenex".
Foaram-bokin'ny bilaogera Ejipsiana
Fanabeazana 26 Novambra 2018
Nataon'ny bilaogera ejipsiana nitafiotra ny foaran'ny boky iraisampirenena ao Kairo taona 2009 tamin'ny famoahana lohateny vaovao miisa 15. Taterin'i Marwa Rakha ihany koa ny fanomanan'ny bilaogera fitsidihana iraisana amin'ilay lanonana mpitranga isa-taona.
Israely 20 Novambra 2018
Satria tsy ampy ny tabataban'ny media manodidina azy, ny vaovao farany dia hoe mihevitra hivadika ho Silamo i Britney Spears mba hanambady ilay sakaizany paparazzo teratany Pakistana, Adnan Ghalib. Niresaka momba izany ireo bialogera Afovoany Atsinanana sy Afrikana Avaratra.
Masoarabo: Fihaonana mangina sy fiarahabana Eid
Arabia Saodita 20 Novambra 2018
Eid ny ao amin'ny tontolo Arabo ary mankalaza ny faran'ny Volana Masina Ramadany miaraka amin'ny tabataban'ny hetsiky ny bilaogin'izy ireo ny bilaogera Arabo.
Emirà Arabo Mitambatra 17 Novambra 2018
Avy amin'ny blaogy Ejiptiana
Mediam-bahoaka 16 Novambra 2018
Tezitra amin'ireo vaovao mikasika ilay zazalahy 14 taona izay miatrika fanamelohana ho faty ao Arabia Saodita ny blaogera sasany. Manasongadina i Freedom for Egyptians sy i Ritzy fa nanamafy ny Fifanarahana momba ny Zon'ny Zaza io fanjakàna io, sy ny hoe tsy mametraka ny fanamelohana ho faty ho an'ny ankizy tsy ampy taona ny lalàna Sharia.
Masoarabo: Afovoany Atsinanana “an-tsary”
Arabia Saodita 14 Novambra 2018
Tsy misy zavatra sarotra atrehina ankoatra ny fahaverezana namana akaiky sy ny manjoa ilay bilaogera monina ao Ejypta, Maryanne Stroud Gabbani, raha nanao veloma farany ho an'ny soavaliny Blue Boy ao amin'ireto sary ireto izy.
Afrika Mainty 10 Novambra 2018
Eoropa Afovoany & Atsinanana 03 Novambra 2018
Vitsy no faly tamin'ny voka-pifidianana omaly, ankoatra ireo efa faly tamin'ny toedraharaha Ejipsiana na ny Firahalahian'ny Silamo. Mieritreritra ny hifindra monina i Big Pharaoh, fihetsehampo izay taterin'i Sandmonkey fa manako ao amin'ny firenena (afa-tsy ny iray amin'ireo namany izay nanao tsoakevitra fa ny "Islam no vahaolana”.)